Ngaba ungandibonisa izikhokelo ezisisiseko kunye nemigaqo ye-Amazon yomgaqo-mveliso?
Ngelishwa, akukho zikhokelo zomhlaba jikelele okanye inkcazo yomkhiqizo we-Amazon oza kusebenza kuwe ngesiphumo esiqinisekileyo. Ndiyathetha ukuba zonke iinkcazo zengqondo ebonakalayo efumaneka kwi-intanethi kufuneka zizame ukuqhuba okokuqala, ukuze uqonde ukuba ingaba isebenze kakuhle-nokuba yinto efana nayo, okanye mhlawumbi idinga ukulungelelanisa kwinqanaba elithile. Kwaye ngaphantsi ndiya kukunika iingcebiso ezifanelekileyo malunga ne-SEO ye-ecommerce kunye neengcebiso ezimbalwa ezinxulumene nemigaqo ye-Amazon yemveliso yemveliso - web hosting in lebanon. Ngethemba baya kuba luncedo kwaye banokunceda ngokucwangcisa iinkcazelo zakho zemveliso. Ekugqibeleni, ukubona imveliso yakho inikezela phakathi kweentlobo eziphezulu ezichazwe kwiindawo zokuthengisa ezithengiswayo kwi-intanethi.
I-Amazon Product Description Imigaqo kunye neZakhono zokuSebenza
Zonke iphepha lomhla wokuvelisa umkhiqizo kwi-Amazon lijoliswe ekunikeni umfanekiso omkhulu weenzuzo ezinkulu kunye neempawu into esetyenziselwa ukuthengiswa (umz., ubukhulu, isitayela, izixhobo zokusetyenziswa kwansuku zonke, iingcebiso ezisebenzayo malunga nenye enye into engasetyenziswa ngayo, njl.). Ngokuqhelekileyo, inkcazo yemveliso ye-Amazon ibonisa ukuba bakhuthaze abo bathengisi abaye bafumana uluhlu lweemveliso zabo ezifakwe ngokuchanileyo, ulwazi lwewaranti, imiyalelo yokugcina, kunye negama elivakalayo, igrama kunye neempompo. Ukhangeleka nje ngomxholo wokuqala we-Engine Engine Optimization (SEO), kunene?
Iindlela ezimbi zokuSebenza koMsebenzi wakho Inkcazo
Gwema ukusebenzisa ezi nkalo zedatha kwiinkcazelo zakho zemveliso:
Nayiphi na idatha echanekileyo yenkampani (inqaku, nangona kunjalo, ukuba akuyiyo ngegama lakho lomkhiqizo wegama lomhlaba - ukuba uya kulukhankanya nakwihloko lakho lemveliso yeenjongo zokulungiselela kunye nokuchithwa okubhekiselele kuphando oluthile olujoliswe kuyo.
Naluphina iinkcukacha ezingabalulekanga (ezifana nedatha nakweyiphi enye, ayikho into enxulumene nayo othengisa kuyo), kunye negama lomthengisi, ii-URL zewebhu okanye iidilesi ze-imeyile.
Imiboniso yokuphromotha ngokuvakalayo okanye iifowuni kwisenzo (umzekelo, nantoni na enjenge "ukuthunyelwa kwamahhala," "isibonelelo esikhethekileyo," "ukuthengiswa okuthe ngqo," njalo njalo).
Iingcebiso ezilungileyo kwiiNqaku zeBlecti zeMveliso yakho
Enyanisweni, uluhlu lweengqungquthela zamabhola luyimpinci elincinci nangaphezulu. yenkcazelo yakho yemveliso. Yaye le nto kukuba iibhola zakho kufuneka zichaze kwaye zicacise ngangokunokwenzeka. Ngaloo ndlela, qwalasela oku kulandelwa kwindlela elandelayo yokusebenzisa oku kulungelelanisa eli candelo kwicandelo elifanelekileyo:
nganye inqaku kufuneka liqalise ngegama elibiziweyo.
Onke amanani acetyiswa ukuba abhalwe njengamanani.
Igama elincinci ngaphandle kokuphelisa iziphumlisi yinto efanelekileyo.
ngalinye ibinzana kwi-bullet efanayo kufuneka lihlukaniswe kunye nama-semicolons.
Ukugqamisa ngaphezu kwezibonelelo ezinhlanu eziphezulu okanye iimveliso zomsebenzi.
Ukubhala uluhlu lweempawu ezithile kuphela kufuneka lubekwe phambili.
Iingxelo ezingavumelekanga, kunye nokupapashwa, ixabiso, okanye ulwazi lokuthumela alucebisi ukuba uluhlu lwamaphupha eebhola phantsi kweyiphi na imeko.